YAAB: Foden Oo Xalay Cadho Kaga Baxay Kulankii Uu Xalay Kooxdiisa Guusha U Keenay & Arrinta Mbappe La Xidhiidha Ee Uu Diiday - Laacib
HomeWararka Champions LeagueYAAB: Foden Oo Xalay Cadho Kaga Baxay Kulankii Uu Xalay Kooxdiisa Guusha U Keenay & Arrinta Mbappe La Xidhiidha Ee Uu Diiday
YAAB: Foden Oo Xalay Cadho Kaga Baxay Kulankii Uu Xalay Kooxdiisa Guusha U Keenay & Arrinta Mbappe La Xidhiidha Ee Uu Diiday
Da’yarka kooxda Manchester City ee Phil Foden ayaa ahaa mid cadhaysan walow uu kooxdiisa xalay ka saaciday inay kasoo gudubto dhigeeda Borussia Dortmund oo uu gool cajiib ah kasoo dhaliyay isaga oo kasoo caawiyay inay 2-1 kusoo guuleystaan ciyaartii ka dhacday gegida Signal Iduna Park.
Arrinta uu ka cadhaysnaa Foden ayaa ahayd in bartiisa Twitter-ka lasoo dhigay sawirkiisa iyo qoraal uu kusii kululaysanayo mucjisada Paris Saint-Germain oo uu ku leeyahay “Mbappe diyaar ma tahay?”
Labada kooxood ayaa isku arki doona wareega afar dhammaadka Champions League kaddib markii ay Paris qudheedu habeen hore kasoo gudubtay kooxda difaacanaysa koobka ee Bayern Munich.
Tweet-kaas ayaa ahaa mid sii hurinayay guud ahaan Paris Saint-Germain gaar ahaan Mbappe balse arrinta cadho galisay da’yarka ree England ayaa ahaa in shirkada u maamusha baraha bulshadu ay iyada oo aan kala tashan deg-degtay isla markaana qoraalkaas baahisay.
Foden iyo wakiiladiisa ayaa la filayaa inay ka tashan doonaan talaabada xigta ee ay qaadayaan iyadoo ay macquul tahay inay gabi ahaanba kala huleelaan shirkadaas.
Kulanka afar dhammaadka ku dhex mari doona kooxaha mulkiilayaasha carbeed ayaa noqon doona mid xiisahiisa leh iyadoo 22 sano jirka ree France uu yahay xiddiga halista ugu weyn ku ah Sky Blues.
Mbappe ayaa ahaa xiddigii udub dhaxaadka u ahaa natiijadii ay Paris Saint-Germain kaga aarsatay dhigeeda Bayern Munich isaga oo 2 gool kasoo dhaliyay kulankii Parc des Princes ka dhacay ee ay 3-2 kusoo adkaadeen.